အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2019: iPhone ကို, OnePlus, Samsung နဲ့ Huawei ကနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆင့် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2019: iPhone ကို, OnePlus, Samsung နဲ့ Huawei ကနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆင့်” ရှမွေလသည် Gibbs စားသုံးသူနည်းပညာအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, for theguardian.com on Tuesday 17th December 2019 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဂါးဒီးယန်းဝယ်သူ၏လမ်းညွှန်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများထုတ်ပြန်ခဲ့သည် 17 ဒီဇင်ဘာလ 2019, နှင့်ထိုအချိန်ကအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်မော်ဒယ်များကိုကိုယ်စားပြုတယ်. အသစ်မော်ဒယ်များအဖြစ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်, သင့်အတွက်မှန်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီရန်ဤလမ်းညွှန်ကိုအသစ်ပြုပြင်မည်.
အကောင်းဆုံးခြုံငုံ: OnePlus 7T Pro
The OnePlus 7T Pro hasamassive, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မျက်နှာပြင်, သည်မိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးအလိုက်အလျင်မြန်ဆုံးခံစားနိုင်သောဖုန်းဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်များဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် In-display fingerprint scanner ပါရှိသည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
ဤရွေ့ကားပုံမှန် update လုပ်အပေးအယူတတိယပါတီစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်ရင်းမြစ်ခဲ့သည်. စာဖတ်သူမှ နှိပ်၍ ၀ ယ်ယူပါကဂါးဒီးယန်းသည်ကော်မရှင်အသေးစားတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက.
The follow-up to the best smartphone of the first half of 2019 ဖြစ်, unsurprisingly, the best phone to end 2019. The OnePlus 7T Pro isaminor update to the stellar OnePlus7Pro that keeps all the good bits, improves the camera, and speeds up the fingerprint scanner.
The monster 6.67in QHD+ AMOLED screen runs at 90Hz – compared with 60Hz for most of the competition – is arguably the best in the business. ဒါဟာတောက်ပင်, crisp and super smooth, plus it’s free of holes or camera notches. The selfie camera pops up from the top on command –aconsistent crowd-pleaser.
The 7T Pro is the fastest-feeling phone – everything zips along. It has Qualcomm’s top chip, အ Snapdragon 855+, 8GB of RAM and 256GB of fast UFS3.0 storage – plenty for practically everything. The optical in-display fingerprint scanner is even faster than before continuing to put the competition to shame.
The latest OxygenOS 10, the firm’s super-slick version of Android မှာ 10, is arguably the best in the business too, and you’ll get prompt updates for three years.
The triple camera system on the back is good too, combininga48MP main, 16MP Ultra-wide ထောင့်နှင့် 8MP တယ်လီဖုန်းကင်မရာတို့ဖြစ်သည်. New for the 7T Pro isasuper-macro mode, which is surprisingly good, producing crisp images up to just 2.5cm from the lens – great fun. The 7T Pro can’t quite beat the iPhone 11 Pro or Pixel 4XL, ဒါပေမယ့်သူကအသေးစိတ်နှင့် utility ကိုအပေါ်ကြွင်းသောအရာကိုက်ညီသို့မဟုတ်ရိုက်နှက်.
The 7T Pro lasts about 32 စွဲချက်အကြားနာရီ, making it one of the better performers. Charging is exceptionally fast via the firm’s WarpCharge system too, ရိုက် 70% in just 34 minutes via cable. There’s no wireless charging though.
ပြိုင်ဘက်ကင်းမျက်နှာပြင်, သက်သက်မြန်နှုန်းနှင့် In-display fingerprint scanner, slick OxygenOS နှင့်ပေါင်းစပ်သည် 10 ပင်သာမန်အလုပ်များကိုပျော်ရွှင်စေပါ. The massive OnePlus 7T Pro isastretch worth making.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: OnePlus 7T Pro review: the best kind of deja vu
အကောင်းဆုံး iOS: Apple က iPhone ကို 11 Pro ကို
Apple’s smallest new iPhone 11 Pro is also the best combination of size, ဖန်သားပြင်, performance, ဘက်ထရီသက်တမ်း, size and camera. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
Good things come in smaller packages. အဆိုပါ iPhone ကို 11 Pro isn’t the biggest or the most expensive of Apple’s 2019 စမတ်ဖုန်းများ, but it is the best and very nearly the best phone of the year.
အဆိုပါ iPhone ကို 11 Pro combinesastunning, big-enough 5.8in screen, svelte, luxurious-feeling body, top-notch performance and battery life to keep up with most of the competition.
But asawhole, no other phone can match the iPhone 11 Pro in power, capability and size. အဆိုပါ iPhone ကို 11 Pro is the smaller phone to buy and the best running iOS.
မဝယ်ပါနဲ့: you don’t want to spend £1,049 or want to use Android
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: iPhone ကို 11 Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: the best small phone available
တစ်ဦးကကြီးမားသော, သေးငယ်တဲ့ဖုန်းတွင်လှပသောမျက်နှာပြင်, Galaxy S10 သည် Samsung ၏အထင်ကရစမတ်ဖုန်းလိုင်းတွင်အစက်အပြောက်ဖြစ်သည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
If you want the Android sweet-spot betweenabig, ကိုင်တွယ်ရန်နှင့်အိတ်ကပ်ထဲ ၀ င်ရောက်ရန်လွယ်ကူသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်ဖုန်းအရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း, သော Galaxy S10 ပါပဲ.
Small bezels all round make the phone pretty compact compared with rivals, ထိုသို့လည်းအလင်းပါပဲ. ဒါဟာဆဲဖန်ခွက်နှင့်သတ္တုသားညှပ်ပေါင်မုပါပဲ, ဆိုလိုတာကရေတံခွန်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိစ္စတစ်ခုသင်လိုအပ်လိမ့်မယ်.
The Galaxy S10 was recently updated with Samsung’s new One UI2ဆော့ဖျဝဲ, based on the latest Android 10 including much-improved navigation gestures. You should get about three years of software support from release from Samsung, although the company is usually slower than Google and OnePlus to deliver big Android version updates.
The rear triple camera is good allowing you to zoom from 0.5 2x မှတဆင့်, နှင့် 10x စပ် zoom ကိုရန်. It won’t beat the pixel4XL သို့မဟုတ် iPhone ကို 11 Pro ကို, but gets the job done. The selfie camera pokes straight though the screen and is one of the better ones on the market.
စွမ်းဆောင်ရည်ကကောင်းပေမယ့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကနည်းနည်းအားနည်းနေတယ်, lastingaday of usage but not much more. The ultrasonic fingerprint sensor mounted under the display has proved to beabit slow and finickity over time, which can be annoying.
A big screen Android experience inarelatively small phone is the main selling point, ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်းကူညီကြည့်ရှုသည်.
ဝယ်ပါ: you wantagood balance of screen and phone size without breaking the bank
Huawei P30 Pro တွင်ကြီးမားသောပစ္စည်းရှိသည်, လှပသောမျက်နှာပြင်, ကြာရှည်ခံသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ထူးခြားသောအလင်းနည်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းကင်မရာ, 5က x optical zoom နှင့် 50x ဒီဂျစ်တယ် zoom အထိ. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
ဖုန်း၏အကောင်းဆုံးကင်မရာမှာ Huawei P30 Pro ဖြစ်သည်. Even at the end of 2019, no other phone provides as comprehensiveacombination as Huawei’s new Leica quad camera.
20MP 0.6x ultra-wide angle ကင်မရာသည်ပျော်စရာကောင်းသည်, the main 40MP camera is terrific and it’s joined byanew periscopic 5x optical zoom camera that gets you closer than any other smartphone. ငါးကြိမ်ချဲ့မလုံလောက်ခဲ့လျှင်, ထိပ်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံး 10x hybrid zoom ပြီးတော့ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူး 50x အထိအထိရှိပါတယ်. 3D-sensing time-sensing time-of sensor သည်ကျောဘက်ရှိ module များကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်.
ဘေးဖယ်၏ထူးခြားသောအဆင့်ဆင့်, the P30 Pro also has low-light performance that instantly turns night into day without having to wait foracouple of seconds of capture. The P30 Pro might not have the best Night Sight rival, but most of the time it simply doesn’t need it.
The rest of the phone is excellent, လွန်း, with stunning colour options. The large 6.47in FHD+ OLED is great, withasmall notch in the top containing the selfie camera and slim bezels all round. ကွေးကောက်နံပါတ်တွေကဖုန်းရဲ့အကျယ်ကို ၇၃.၄ မီလီမီတာကိုကျဉ်းမြောင်းအောင်ထားတယ်, meaning it’s still relatively manageable and easier to wield day-to-day particularly compared with the OnePlus 7T Pro သို့မဟုတ် iPhone ကို 11 Pro Max.
The in-screen optical fingerprint sensor is second only to the OnePlus 7T Pro’s. Huawei’s Kirin 980 Processor ​​ကို, 8RAM ၏ GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128GB, provides great performance andabattery that will last about two days. Plus the battery charges super fast and has wireless charging and power sharing.
Huawei ၏ပြုပြင်ထားသော Android 10, EMUI 10, အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်အပြင်အင်္ဂါရပ်များများစွာပါ ၀ င်သော်လည်းလူတိုင်း၏အရသာနှင့်မကိုက်ညီပါ. Huawei is still facing sanctions from the US as part of the အမေရိကန် - တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ, အရာ ၎င်း၏အနာဂတ်မသေချာမရေရာစေသည်. The P30 Pro’s recent Android 10 update showed that it should continue to receive updates as normal, သို့သော်.
အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး: OnePlus 7T
စျေးနှုန်း: £549 / $599
The OnePlus 7T offers most of what makes the OnePlus 7T Pro the best phone going, but inasmaller, cheaper package. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
It’s got 2019’s top-of-the-line Snapdragon 855+ Processor ​​ကို, 8GB of RAM and 128GB of fast UFS3.0 storage. It also lastsagood 31 hours onacharge, and its OxygenOS 10 Android software is fast and slick. OnePlus guarantees two years of software updates and an additional year of bi-monthly security updates from the release date of the phone too.
ဝယ်ပါ: you wantatop-notch phone but don’t want to spend more than £549
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: OnePlus 7T review: the new cut-price flagship king
Apple က iPhone ကို 11
Apple’s cheaper iPhone 11 is the follow-up to last year’s iPhone XR and offers most of the features of the iPhone 11 Pro ကို. It has slightly battery life too, but is missing the excellent ultra-wide angle camera, hasaslightly larger, but worse screen. It is made of aluminium and glass, သံမဏိအစား, ယင်း၏ဇိမ်ခံခံစားမှုနှင့်၎င်းသည် Apple ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအသိပညာဆုံးရှုံးခြင်း.
အဆိုပါ iPhone ကို 11 looks great in red or white, ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမဆိုလမ်းပိုင်းအားဖြင့်စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး, ပြိုင်ဘက်များထံမှစစ်မှန်သောအထင်ကရဖုန်းများထက်များများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကုန်ကျစရိတ်များ. အဆိုပါ iPhone ကို 11 certainly holds its own for the money, ဒါပေမယ့် iPhone ကို 11 Pro ကို still the one to buy if you want the best iPhone. If you wantacheaper phone, switch to Android or buy last year’s iPhone XR.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: iPhone ကို 11 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: an iPhone XR withabetter camera
Apple က iPhone ကို 11 Pro Max
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: iPhone ကို 11 Pro ကိုမက်စပြန်လည်သုံးသပ်: မော်ကွန်းဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့် salvaged
6.4in QHD + display ပါသည့်အကြီးဆုံး S10 ၏ဗားရှင်းသည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်တွင်မဆိုအကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်ရှိသည်. အဆိုပါဘဲဥပုံ -shaped အပေါက် - လာကြတယ်ထစ်ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်, နှစ်ခုကောင်းသော selfie ကင်မရာများပါဝင်သည်. နောက်သုံးဆနောက်ကင်မရာကကောင်းတယ်, ဒါပေမယ့် Huawei P30 Pro မှာပြaနာမရှိပါဘူး. စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါတယ်, ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကအကောင်းဆုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာပါ. The fingerprint scanner isabit slow and can be frustrating to use.
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 10+
က Galaxy Note ကို 10+ isaSamsung super-fan’s dream. It has the biggest screen onaSamsung withamonstrous 6.8in on the diagonal, new faster UFS3.0 storage, reasonable battery life and plenty of party tricks. The stylus can now be used asamagic wand for gestures, there are three cameras on the back and is available ina5G version too. The fingerprint scanner isabit slow and can beabit frustrating to use.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Samsung ၏ Galaxy Note ကို 10+ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: bigger and now withamagic wand
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Samsung ရဲ့ Galaxy S10 5G ပြန်လည်သုံးသပ်: ပိုကြီး, ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးရှည်ကြာ
အိမ်ထောင်ဖက် 20 Pro ကကြီးမားတယ်, QHD + မျက်နှာပြင်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော 6.39in, ခန္ဓာကိုယ်, ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ထိပ်တန်းဖုန်းဖြစ်လာသည် 2018. သို့သော်, 3x optical zoom ပါ ၀ င်သည့်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောသုံးဆကင်မရာစနစ်သည် Huawei ၏ P30 Pro အသစ်ထက်ကျော်လွန်သွားပြီ, 5x optical zoom ပါ ၀ င်သည့် Leica quad ကင်မရာပါရှိသည်. It recently received EMUI 10 (Android မှာ 10) and is worth looking out for deals, အထူးသဖြင့် အကယ်၍ သင်သည် 3D face unlock option ကိုလိုချင်ပါက.
Google က Pixel4XL
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Google က Pixel4XL ပြန်လည်သုံးသပ်: not quite ready for primetime
Google က Pixel4– Great phone utterly ruined by terrible battery life – £ 669
← iPhone ကို 11 Pro ကိုမက်စပြန်လည်သုံးသပ်: မော်ကွန်းဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့် salvaged Nvidia က Shield ကို TV ကပြန်လည်သုံးသပ်: တောက်ပ AI အ upscaling နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Android တီဗီသေတ္တာ →